Global Aawaj | घट्यो सुनको मूल्य,कति पुग्यो तोलामा ? घट्यो सुनको मूल्य,कति पुग्यो तोलामा ?
२० फाल्गुन २०७७ 12:17 pm
काठमाण्डौं । स्थानीय बजारमा आज पहेंलो धातुको मूल्य तोलामा नै रु एक हजारले ओरालो लागेको छ । तोलामा रु ८७ हजार ५०० मा बुधबार कारोवार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने रु ८६ हजार ५०० मूल्य निर्धारण भएको छ ।